Bariise “Nin Ajanabi ah ayaa ka danbeeyay qaraxii Muqdisho ka dhacay ” – SBC
Bariise “Nin Ajanabi ah ayaa ka danbeeyay qaraxii Muqdisho ka dhacay ”
Afhayeenka Booliiska DKMG ee Soomaaliya Gen.C/Laahi Xasan Bariise ayaa u sheegay qaar ka mid ah warfidiyeenada in Falka qarax ee Maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho uu ka danbeeyay Nin ajanabi ah oo watay Baasboor Kenyan ah sida uu hadalka u dhigay.
Gen.Bariise ayaa sheegay in ay hayaan passport-ka ninka qaraxa ka geystay Dhismayaasha Wasaradaha DOwlada isaga oo xusay inay wadi doonaan Baaritaanka Cidda falkan soo maleegtay.
Warka Taliska booliiska waxaa uu ku soo beegmaya xilli Afhayeen ka tirsan Alshabaab u sheegay inay iyagu ka danbeeyeen Weerarka qaraxa ee ay wax ku noqdeen dad ka badan 100 ruux oo u badan Arday iyo Shaqaalaha qaar ee wasaaradaha DKMG ee Soomaaliya.
Xaalada Goobta ay wax ka dhaceen ayaa waxaa wali ka soconaya gurmadyo kala duwan iyo daad gureynta dadka qaar oo ku gubtay Weerarka qaraxa oo ahaa mid xoogan oo siweyn looga dareemay Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Wixii ku soo kordha warkan kala soco SBC International Monitoring